Amazon Fire OS: iyo imwe Android | Linux Vakapindwa muropa
Amazon Fire OS: yakanyanya Android
Google yakagadzira Android, yayo Linux-based operating system yemafoni nhare. Kunyangwe isu tatoona mamwe mapurojekiti e-Android, akadai seCyanogen, ikozvino mumwe mukwikwidzi akaomarara anoita kunge abuda, Moto OS inoshanda sisitimu. Iyo Android yakagadziridzwa neAmazon, chitoro chakakurumbira chepamhepo icho chave kupinda munyika yekomputa nekutsika nemapurojekiti akadai AWS uye Fire OS.
Fire OS, yeavo vasingazive chirongwa ichi, ndeye kurerutsa iyo Android (AOSP) yakagadziridzwa neAmazon. Musimboti wayo wakanyorwa muC uye zvikamu zvakanyorwa muC ++ uye Java zvinoshandiswa zvakare kune graphical interface. Moto OS ine APK package maneja, kuwanda-kubata mashandiro uye kugadzirwa kweiyo yakasimba Fire Nhare, Kindle uye mapiritsi, pamwe neFire TV.
Usavhiringidze chirongwa ichi neFirefox OS kubva kuMozilla, inova imwe sisitimu yekushandisa yakavakirwa paLinux uye paHTML5 yemapurogiramu ayo. Inovavarira kukwikwidza Android mune nharembozha, kunyangwe kusvika kwayo parizvino mumusika kuri kushoma, inogona kuve kufunga kwakanaka kweramangwana pamwe neTizen. Muchiitiko cheAmazon Fire OS, inongogadzirirwa maAmazon zvishandiso uye haikwikwidze nevamwe vese panguva ino.
Kunyange zvakadaro mushure mekubudirira kwegore reAmazon, ichizviisa pamusoro peGoogle uye ichinyanyisa kupfuura Azure yeMicrosoft, chitoro chakakurumbira chepamhepo chakakura zvakanyanya kubva pakavambwa, inogona kunge iine zviwanikwa zvakakosha uye kugona kutarisana nedzimwe hofori sezviri kuita izvozvi ... Tichaona mashandiro uye mamwe komputa mapurojekiti eAmazon desktop uye nhare mbozha munguva pfupi? Hatizive, asi zvirokwazvo ishamwari nyowani yenyika yeLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Amazon Fire OS: yakanyanya Android
Ichokwadi ndechekuti iyi sisitimu yekushanda inotonhorera. Amazon yakazvigadzirisa zvizere, mazuva mashoma apfuura ndakatenga piritsi rinouya neiyi sisitimu yekushandisa uye ini ndaifarira chete kuti pane zvimwe zvisingakwanisike maererano neapp!
Pindura kune animeflvgo
Zvese nezve yakanakisa BitTorrent vatengi veLinux
Maitiro ekuchenesa yako usb kubva kumavirusi uye malware